ဂိမ်းကစားနေစဉ်ကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်၊အရာတစျခုသငျသညျရှိစေခြင်းငှါသတိပြုမိကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းကွဲပြားတဲ့မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်ပုံများနှင့်ကိရိယာများမိတ်ဆွေတို့သို့နေသော၊ကောင်းစွာ၊လူပေါ်လူအရေးယူ။ ဒါကြောင့်အနည်းငယ်ယိုများနှုတ် homoerotic ဂိမ္းရွေးချယ်မှုယူသောကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအပေါ်သို့ပေး dudes သို့ dudes တစ်နေရာမှဂိမ်းနှင့်အိမ်မှာမှန်ခံစားရသည်။ လူကြီးလူကောင်းနှင့်လူကြီးလူကောင်း:ဒါကြောင့်ငါ့အပျော်အပါးရန်ဖိတ်ခေါ်ဖို့အတွင်းအခမဲ့လိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်း!, ဒါဟာအတိအကျဘာကိုေျပာပေါ်အဖြူနှင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်ကြောင်းနှိုင်းယှဉ်ကြည့်သောအခါအခြားရွေးချယ်မှုများထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်၊ဤသည်သာအမှန်အဖြေဂေးယောက်ျားတွေအလေးအနက်နေသောအကြောင်းအချို့ဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာ။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအတွေးနှင့်ပတ်သက်ပြင်ဆင်ဤအရပ်ဌာန၌ဖွင့် ၂၀၁၄၊ဒါပေမယ့်အထားအရထားသို့ဆိုပြန်၏ဇူလိုင်လအတွက် ၂၀၁၆။ ထိုကတည်းက၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့က ၄ ကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးအချို့သောစိတ်ကူးခေါင်းစဉ်နှင့်ကျနော်တို့ကယ့်ကိုအထင်အဲဒါဟာအချိန်လူတိုင်းမြင်လျှင်အသီးကိုသီး၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်။, ငါတို့သည်မပြုစေခြင်းငှါအဖြစ်လူကြိုက်အများဆုံး၏အချက်အချာ၊ဒါပေမယ့်စိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေချင်လျှင်သင်အချို့ကြယ်လိင်ဂိမ္းေဖ်ာ္ေျဖေရး၊အဘယ်သူမျှမအသွားဖို့အတွက်ပိုကောင်းသင့်ရဲ့ခေါသည်ပေါက်ကွဲထက်မည္။ သိလိုအဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီ၊ငါ့ကိုချေးသင်၏နားဘို့အချိန်တွင်ပေးမယ်အရည်ရွှမ်းအသေးစိတ်!
ဒါဟာသတိပြုဖို့အရေးကြီးကနေရသွားသောအခါလက်လှမ်းဖို့သင်လုပ်ချင်တဲ့အခမဲ့လိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်း၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အတွင်းပေးဆောင်စရာမလိုဘဲတစ်ခုတည်းတစ်ပြား။ မှန်တယ်-ဒီမှာတာဝန်ခံအခမဲ့နှင့်အစဉ်အမြဲဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့စိတ်ချယုံကြည်ကြောင်းကိုသင်ပါလိမ့်မယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအများကြီးပဲပါစေကစား၊သူတို့ကိုအစဉ်အမြဲနှင့်အစဉ်အမြဲဘဲချောင်းဆိုးတက်မဆိုငွေသား။ ဤနည်းဖြင့်၊ကျွန်မတို့ပြသနိုင်ကျနော်တို့တကယ်ဆိုလိုသည်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အပြည့်အဝယုံကြည်ခြင်း၌ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်။, ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ဒီနေရာမှာအမြတ်အစွန်းအသေးစားအစုံကြော်ငြာ(ဤမ-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြီးများအတွက်ကြီးစွာသောထုတ်ကုန်များကျနော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ထောက်ခံနေ)အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် microtransactions ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းသင်သည်သင်၏ဂိမ်းအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းဖြင့်။ ဒီ freemium မော်ဒယ်မသော့ခတ်သင်အထဲကဖြည့်များ၏မည်သည့်ဂိမ်း၊စကားမစပ်–သူတို့ပဲရှိချင်လျှင်သင်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်အောင်ကျနော်တို့ဆက်လက်ထုတ်ဝေဖို့အကောင်းဆုံးအရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများများအတွက်အွန်လိုင်းလိင်ပါဘူးချင်သောယောက်ျားသည်-သာ။ ကျနော်တို့လျစ်တဲ့အသိုက်အဝန်းနှင့်ပင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူပရိသတ်တွေထွက်ရှာဖို့ဘယ်အရာကိုသူတို့အလိုအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းအတွက်သေချာသောအနာဂတ်များအခမဲ့လိင်ညစ်ညမ်း။
အောင်ဂိမ်းများကြည့်ရှုကြယ်နှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အတော်လေးခက်ခဲ၊ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာကျွန်တော်တို့သုံးစွဲမယ့်အချိန်အကြာကြီးပြည့်စုံလို့ယုံကြည်တဦးရဲ့အရေးအပါဆုံးအမှုအရာအကြောင်းကိုလိင်တူလိင်။ မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ညမ်းဂိမ်းများအားဖြင့်အသက်အရွယ်၊အနိမ့်အရည်အသွေးအမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့ပြဿနာ၊အဓိကအားဖြင့်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ၾကထုတ်လုပ်သည့်နိူးသူတို့ရဲ့အားလပ်ချိန်နှင့်ဘယ်တော့မှကြောင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်။ ကြောင့်ကျွန်တော်တို့၏အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ၄ အပြည့်အဝ-အချိန်ပါဘူး(အားလုံးသည်လိင်တူ၊စကားမစပ်)၊ကျနော်တို့ရရှိနိုင်ခဲ့ပြီးအရည်အချင်းကိုအပေါ်အတွက်အမြင်အာရုံအရည်အသွေးသည်ဒြပ်စင်အတူတူထားရန်အကြောင်းဂိမ်းများရှိသည်အကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်ကျွန်တော်တို့မြင်နေကြရတဲ့အတွက်အမျိုးအစား။, မှန်တယ်:ငါတို့ကတိပေးအကြောင်းသင်ရှာတွေ့ဖို့မသွားမယ့်မည်သည့်ပိုကောင်းရှာဖွေနေဖြန့်ချိသောအရာကိုထက်ရဲ့ထောက်ပံ့အားဖြင့်အခမဲ့လိင်ညစ်ညမ်း။ ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးအားလုံး၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအပေါ်အညီညွှတ်ရေးအင်ဂျင်၊အမှန်တကယ်အကြှနျုပျတို့ကိုဖန်တီးရန်နိုင်စွမ်းမြင်ရကြောင်းပြောဆိုခြင်းကိုလည်းငါတို့သည်ယုံကြည်လူတိုင်းကြည့်ဖို့လိုလား။ အသားအရေအရည်အသွေး၊လိင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၊ပြန်ပြီးတော့–သူတို့အားလုံးဟာရုပ်ပုံလွှာစုံလင်သော! လုံလောက်ကြောင်းပြောဖို့ဆိုရင်ယုံကြည်အားဖြင့်ကတ္တရာစေးကိုအပေါ်အခြေခံပြီးဘယ်လိုတစ်ဂိမ်းကိုကြည့်၊သင်ဆက်ဆက်လာဖို့လက်ျာခရီးလမ်းဆုံး။
၏ရလဒ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်အဝ-အချိန်အကၽြႏု္ပ္ဤအကျိုး၊အကြှနျုပျတို့သညျဖို့စီမံခန့်ခွဲမယ့်ပါင္းစုံေျ ၂၆ ခေါင်းစဉ်နှင့်လွှတ်စေချင် ၅ မှ ၇ တွင်နှစ်စဉ်အခြေခံကနေထွက်ပေါ်ကဒီမှာ။ အချို့ကြပြန်လွှတ်ပေးသာယူက ၃၀ သို့ ၆၀ မိနစ်ပြီးသတ်နိုင်ရန်အတွက်၊သော်လည်းအချို့ဂိမ်းယူနိုင် ၁၀+နာရီအမှန်တကယ်ပြီး။ အနုပညာလက်ခလုတ်မှခေါင်းစဉ်မှခေါင်းစဉ်အဖြစ်၊အလုပ်ဂိမ်းဒြပ်စင်များ၊အကြမ်းနှင့်တော့။ ကြွင်းသောအရာစိတ်ချပါမလာတာပါပဲကူးယူနှင့်တူညီသောဂိမ်းကျော်နှင့်တဖန်မည်မဟုတ်ကြောင်းအလွန်စမတ်မှာအားလုံး၊မရ?, အစား၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းထုတ်လုပ်ခဲ့ကြမြေပြင်ကနေတက်အောင်လိင်တူဂိမ်းကစားချစ်သူများဆုံးဖြတ်နိုင်သည်အမျိုးအစားများဖြန့်ချိသူတို့ကြိုက်သွားပြီးရင်သူတို့နဲ့အထက်အခြားသူများ။ ဤအပြင်၌၊ငါပြုဖော်ပြရန်ချင်၊အကြောင်းကြည့်ရှု၏အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအကနေတဆင့်ပြုသောအမှု၊ဒါကြောင့်သင်ဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ်ဘာမှဒေါင်းလုပ်! ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်လည်းအနိုင်ကစားရန်အခမဲ့လိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းအပေါ်သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းကိရိယာ၏တိုးကယ်ရှိရမည်သင်ဆန္ဒရှိဖို့အကူးအပြောင်းမှပြန်ကွန်ပျူတာမည်သည့်အချက်မှာအချိန်အတွက်။ ကျနော်တို့ကြီးသောတံစဉ်များကိုနည်းပညာများအတွက်လွန်းအများ၏ရည်ရွယ်ချက်များလျှော့ချဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေးနိုင်ရန်အတွက်လျော်ကြေးဘောင်နှုန်း။, ဒါဟာနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းပစ္စယမ၊ဒါပေမယ့်အလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်သေချာလူတိုင်းခံစားနိုင်အခမဲ့လိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများအဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့အမျိုးအစားစက်ကိုသူတို့အပေါ်။
ကျနော်တို့အများကြီးရှိသည်အစီအစဉ်များသွားရှေ့ဆက်အခမဲ့လိင်ညစ်ညမ်းဂိမ္း:ဒါဟာဖြစ်မသွားမယ့်တစ်ဦးအကြွင်းမဲ့အာဏာနှင့်ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပြုပါသည်သောသင်ဘုတ်အဖွဲ့တွင်နောက်ကျတာထက်။ နောက်နှစ်၊ထပ်ထည့်တာပေါ့အများအပြားပိုအားကစားပြိုင်ပွဲ၊အားအခမဲ့လိင်ဗီဒီယိုများကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရှင်၊အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်ကဲ့သို့တစ်ဖက်ဆာဗာနှင့်တရားဝင်ဖိုရမ်၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အစည်းများ၏သီးသန့် ၃D များသည်မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုရှာဖွေနိုင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအွန်လိုင်း။, ရှိပါတယ်အချို့သောကြီးမားတဲ့အစီအစဉ်အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်ပတ်သက်။ချဲ့ထွင်လွန်း၊ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မျက်စိစောင့်ရှောက်ခ်ဥ္သီး–မစောင့်ကြကုန်အံ့မှသင်ဘယ်လိုသိကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကသွားကြည့်ပြီးလအနည်းငယ်မှာ'အချိန်!